Bike Isina Kusungwa neRed Bull, yakanyanya kuchovha bhasikoro yeIOS | IPhone nhau
Bike Isina Kusungwa neRed Bull, yakanyanya kuchovha bhasikoro yeIOS
Nguva nenguva tinoda kutarisa kuApp Store (pane kakawanda pazuva) nechinangwa chekuvhima zvakanakisa kupa kana kuziva kuti ndeapi mafashoni ekushandisa kana mitambo kuitira kuti urege kuzoapotsa. Kana rimwe zuva raive jana reInkHunter, nhasi tinokuunzira Bike Unchained, uyu mutambo wakanyanya wemabhasikoro wakatsigirwa naRed Bull unokutendera iwe kuti uwane zvakanakisa kubva kune yako iPhone kana zvasvika kumitambo. Ndiwo mutambo uri kutungamira chikamu chemahara muApp Store uye nechikonzero chakanaka, mifananidzo-yekumisa-moyo, mepu dzinonakidza uye mutambo wakanaka. Isu tinokuudza kuti nei kuri kubudirira.
Nemutambo uyu tichakwanisa kumisikidza yakanyanya kuchovha «mutyairi». Nemhando dzakasiyana dzemabhasikoro nemidziyo isu tichakwanisa kumhanyisa nzira dzinoyevedza dzatinowanzoona mumavhidhiyo akatsigirwa eRed Bull, ari pamiganhu neanopenga, tinowana zvipingaidzo, kusvetuka zvisingaite uye kumhanya kupisa, inosangana nezvose zvinodiwa kuti uve mutambo unonakidza, uchiperekedzwa nemifananidzo yakanaka. Heano maratidziro anoita Red Bull:
Dhawunirodha izvozvi uye mujaho pamakwara makuru, kusanganisira pachiitiko chakakura kwazvo chepasirose, Red Bull Rampage! Tora mabhasikoro asingatendeseki, famba pasirese, unganidza yako timu kukwikwidzana nemukwikwidzi wako mukurusa, timu yePraedor, uye urwire kukwira kunzvimbo yekutanga padhorobha.
Tasva usingatyi kuburikidza neepiki nzira dzinosanganisa Enduro, Downhill uye Slopestyle masitaera. Sangana nevatyairi vakanyanya pasirese, saBrandon Semenuk, Rachel Atherton, Andreu Lacondeguy nevamwe vazhinji ...
Bike Isina kusunganidzwa inomhanya-mhanya mijaho nenjodzi yakazadzwa neanofambisa anouraya, freestyle chiito, uye kupenga kweanopenga - iko kushanduka kweye mobile mobile kuchovha!
* NHAU Dzvuku Bhuru Rampage makwara. Epic tracks kubva pasi rose freeride gomo bhasikoro chiitiko.
* 4 inoshamisa maseru epasirese epasi kuti uongorore: Whistler, Alps, Japan neUtah (uye nezvimwe munzira).
* Mujaho munzvimbo yega yega yeumbozha panguva dzakasiyana dzezuva - chiitiko chega chega chichava chakasiyana neicho chakapfuura.
ZVINOGONESESA ZVINOGONESESA NEMAOKO
* 69 chiito chakazara matraki neaya anotonhorera uye enjere ekuchinja.
* Kanda bhasikoro rako pasi pegomo kuti uwane kukurumidza, kuratidza maitiro ako mumhepo uye ita tsunami flips, muswewsi uye zvimwe zvakapenga stunts.
IPAI YAKO BATA
* Unganidza rako rako timu uye gadzirisa yavo michina uye hunyanzvi kuti uve nechokwadi chekutanga nzvimbo mumakwikwi.
Nakidzwa nemutambo online kana kunze kwenyika uye akasiyana mutambo modes: enhoroondo mushandirapamwe, nekukurumidza mutambo uye unonakidza chaiwo makwikwi Nyowani Murumbidzi Dambudziko uye Yakatemwa Nguva Zviitiko zvinowedzera kuwedzera sarudzo dzekukwikwidza uye kuhwina mibairo mikuru.
Tinokusiyaiwo vhidhiyo diki yemutambo kuitira kuti iwe uzive zvakawanda kana zvishoma izvo zvauchazowana usati watanga kutamba ino naka mutambo, sezvo iwe uchiona iro rwiyo uye iwo magirafu haaodza mwoyo kana zvasvika kune adrenaline.
Pakati nepakati pehupenyu uye chokwadi, tinogona kuona nharaunda yezvisikwa nenzira inoshamisa. Pasina mubvunzo kutaura, iwo madhairekitori akajeka, zvikasadaro zvinogona kunge zvisingaite kuitamba pane mbozhanhare mbozha, kana zvirinani zvingave zvakaoma chaizvo kuti uyananise. kutsva nekukurumidza uye kuchinja kwescreen. Iwo mavara ari mu3D chimwe chinhu chinofanira kukosheswa mumutambo nehunhu uhu, saka isu tichaona iyo kamera ichiita mafambiro ayo anoipa iyo zvishoma yechokwadi.
Iyo yemahara, asi senge ingangoita mitambo yese yatakatowana muApp Store, yakabatanidza kutenga. Yakaunganidza ongororo dzemafaro muApp Store uye kudiwa kwekutenga hakuna kusimba. Hongu zvirokwazvo, inogara isingafungidzike 255 MB izvo zvinogona kuwedzerwa nega yega yekuvandudza. Nehurombo, ichiri muChirungu chete asi zvinyorwa hazvisi izvo zvinoita mutambo uyu unogona kutambwa munenge chero mutauro. Inoenderana nechero chishandiso cheIOS chinosvika pane iOS vhezheni 8. Nakidzwa neRed Bull bikes.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Bike Isina Kusungwa neRed Bull, yakanyanya kuchovha bhasikoro yeIOS
Aya ndiwo maApple Stores ayo Apple achavhura maererano nerunyerekupe
Nguva yekupedzisira yekutenga matikiti eWWDC 2016 inopera